Taageerada AMISOM | UNSOS
UNSOS waxaa loo igmaday inay taageero dhanka saadka ah siiso AMISOM, kuwaasoo loogu geeyo in ka badan 70 goobood oo ku baahsan aagaggooda hawlgallada ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo ah in ka badan 400,000 oo kiiloomitir oo laba jibbaaran.
Xirmada taageerada saadka QM ee loogu talagalay AMISOM waxay isugu jirtaa:
Cunnada, biyaha, caafimaadka iyo fayadhowrka, shidaalka, tas-hiilaadka iyo injineernimada, gawaarida iyo qalabka kale, isgaarsiinta iyo macluumaadka teknolojiyada, taageerada macluumaadka, maareynta hantida, awooda-dhisida, adeegyada duulista hawada iyo adeegyada caafimaadka (oo ay ku jiraan medevac/casevac)
Shidaalka iyo taageerada dayactirka qalabka saaxiibada ay leeyihiin iyo kuwa saaxiibada leeyihiin ee loogu deeqay hawlwadeenada AMISOM.
Taageerada awood dhisida iyo tababarka oo la siinayo cutubyada si ay awood ugu yeeshaan hawlgalladooda badqabka iyo wax ku oolka ah ee qalabka QM iyo gaarsiintooda ka hor hawlgelinta iyo tababarka masraxa.
UNSOS waxay taageero siisaa socsocodka, markii ay ka codsadaan waddamada deeqaha bixiya, ee ciidamada iyo millatariga AMISOM iyo shaqaalaha qalabka iyo qalabka iyada oo loo marayo hantida howlgalka iyo qandaraasle koox saddexaad ah oo loogu talagalay dejinta, dib u celinta, iyo wareegga.
Dib u bixinta tan iyo 2015 ee qarashaadka isku filnaanashah ee guutada, oo ay kujiraan cunnada, isgaarsiinta, nadiifinta, agabyada xafiiska, iyo teendhada. UNSOS waxay ku siisaa alaabtaan goobaha guutooyinka ay ku yar yihiin awood ahaan ama ay ka codsadeen UNSOS inay bixiso.
Dib u bixinta tan iyo 2012 ee qarashaadka COE, oo rasmi ahaan loo sameeyay sannadkii 2012 iyadoo loo marayo heshiis isafagarad ah oo ka socda AU-UN, kadibna waxaa lagu daray dib u bixin qalabka lumay ama waxyeello kasoo gaartay falalka colaada (dib u bixinta lacagta qalabka lumay ama waxyeeloobay intaan la gaarin Febraayo 2012 waa masuuliyada AU iyadoo loo marayo tabarucaadaha mutadawacnimada ah ee Sanduuqa Ammaanada QM - hoos ka eeg).
UNSOS waxay AMISOM siisaa talooyin farsamo si ay u taageeraan horumarinta iyo hirgelinta himilada siyaasada deegaanka, oo ay ku jirto taageeridda xoojinta awoodda AMISOM ee kormeerka iyo wax ka qabashada u hoggaansanaanta dhammaan qeybaha.
UNSOS waxay maalgelisaa hay’adda UNMAS si ay u siiso istiraatiijiyada maareynta halista qarxyada, hawlgal iyo awoodaha farsamo ee lagu taageerayo AMISOM, waxaa ku jira samaynta iyo hirgelinta istiraatiijiyado lagu yaraynayo halista. UNMAS waxay AMISOM siisaa hagitaan, latalin, falanqayn iyo tababarro ku saabsan ka hortagga iyo ka hortagga halista qaraxyada waxayna qabataa haraadiga walxaha qarxa ee ka haray dagaalka (ERW).
SANDUUQA AMMAANADA AMISOM
Sanduuqa Amaanada ee AMISOM waxaa la aasaasay kadib qaraarkii Golaha Ammaanka ee 1863 (2009). Dawladaha xubnaha ka ah ayaa ayaa sameeyay tabarucaad mutadawacnimo ah oo loo adeegsan karo in lagu taageero noocyo badan oo ka mid ah hawlgalka AMISOM oo aan lagu maalgelin habab kale si loo abuuro loona kordhiyo faa'iidada hawlgalka. Hawlahaan waxaa kamid ah qorista shaqaale loogu talogalay Qaybta Dabagalka Dhibaatooyinka Rayidka, Falanqaynta iyo ka Jawaabta (CCTARC); hawlgallada macluumaadka dadwaynaha, oo ay kamid yihiin isticmaalka raadiyaha bulshada; dib u bixin la siinayo guutooyinka qalabka ka lumeen falalka colaada kahor sannadkii 2012.
Sanduuqa Ammaanada ayaa sidoo kale loo adeegsadaa in lagu maalgeliyo Mashaariicda Saamaynta Degdega ah (QIPs) ee loogu talagalay meelaha laga qabsaday Al-Shabaab si loo gaarsiiyo taageero degdeg ah bulshooyinka ay dhibaatadu saamaysay. Mashruuca waxaa loo isticmaalaa in lagu bixiyo kaabayaasha aasaasiga ah iyo adeegyada kala duwan, oo ay ku jiraan dayactirka dugsiyada, gadashada agabka caafimaadka iyo qalabka guryaha, qodista ceelal biyood iyo nadiifinta deegaanka. Dadaalladani waxay si toos ah gacan uga geystaan u-wareejinta mas'uuliyadaha amniga ee adeegyada amniga qaranka.